Plain (geared, eletriki) trolley Factory - China Plain (kwadoro, electric) trolley Manufacturers, suppliers
GCT/GCL Series trolley track bụ ụdị usoro dị mfe, dị mfe ịrụ ọrụ, ọkụ na obere ụgbọ njem na -akwado igwe na -ebuli elu ma nwee njiri mara nke usoro dị mfe yana ịrụ ọrụ dị mfe. Enwere ike itinye ya na Chain Hoist ma ọ bụ Electric Hoist ma ọ bụ igwe ọ bụla ọzọ na -ebuli elu iji mepụta trolley na -ebu ibu. Ọ nwere ike na -agba ọsọ ngwa ngwa na ala flange nke I beam track na usoro okirikiri maka ibudata na ibudata ngwongwo na ihe eji eme ihe.E nwere ike kewaa trolley na ụdị dependi abụọ ...
12V 4 × 4 winch eletriki
Mmeghe ngwaahịa ngwaahịa winch eletriki bụ ngwaọrụ eji arụ ọrụ iji dọpụta (ifufe) ma ọ bụ pụọ (ifufe pụọ) ma ọ bụ mezie “esemokwu” nke eriri ma ọ bụ eriri waya (nke a na -akpọkwa “eriri” ma ọ bụ “eriri waya”) . Winch eletriki anyị bụ ihe ga-enwerịrị maka ngwa mgbake yana ọ dị mfe iji. Karịsịa kachasị maka iji mgbake. Na -agụnye ihe niile ịchọrọ maka nhazi na ịrụ ọrụ. Uru: 12/24V volt usoro ọnya moto maka ike ...
Bannon Electric Hoist, Ntuziaka Lever Chain ndoli, Micro Electric eriri eriri, Igwe ọkụ eletrik eletrik, Jet 1.5 Ton Chain ndoli, Lever Puller,